Maamulka Somaliland oo Maanta siideysay qaar kamid ah Wariyeyaashii xirnaa | dayniiile.com
Home WARKII Maamulka Somaliland oo Maanta siideysay qaar kamid ah Wariyeyaashii xirnaa
Maamulka Somaliland oo Maanta siideysay qaar kamid ah Wariyeyaashii xirnaa
Muddo lix Cisho ah ayay ku xirnaayeen Xarunta dambi baarista ee Magaalada Hargeysa ku dhawaad 15 Suxufi oo kamid ah Wariyeyaasha Madaxa bannaan ee ka howlgalla Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Soomaaliland.
Wariyeyaasha ayaa xilliga la xirayay ku howlanaa tebinta Shaqaaqo ka dhacday Xabsiga Dhexe ee Magaalada Hargeysa, waxaana Maanta Soomaaliland ay siideysay 12 kamid ah Wariyeyaasha.
Weriyayaasha la sii daayey ayaa waxa laga reebay oo aan la sii dayn Saddex Weriye oo kala ah Maxamed Cabdi Sheekh (Ilig), Cabdijibaar Maxamed Xuseen iyo Weriye ka tirsan Telefishanka Gobonimo TV, iyada oo Xukuumadda aysan faah faahin sababta loo reebay.
Intii ay xirnaayeen Wariyeyaasha ka howlgalla Magaalada Hargeysa ayaa waxaa cambaareeyay Madaxda Xisbiyada Mucaaradka Somaliland, Ururada Saxaafadda Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale oo katirsan Somaliland.
Wasiirada Warfaafinta iyo Arrimaha Gudaha ayaa markii la xiray Wariyeyaasha Warbaahinta u sheegay in Saxafi kasta ee lagu helay in uu dambi galay sharciga la marsiin doono, iyaga oo Wariyeyaasha ugu baaqay inay ka fogaadaan waxkasta oo dhib keeni kara.
Previous articleMaamulka degmada Kaxda oo sheegay inay hayaan xog ku saabsan dadkii dilay Abwaan Badal
Next articleDiiwaangelinta musharrixiinta Guddoonka Golaha Shacabka & Aqalka Sare oo Maanta bilaabaneysa
The Myanmar junta has announced that 1,600 detainees will be released...
Somaliland oo ku dhawaaqday in abaartii ugu darneyd ay kajirto degaanadeeda
Ciidanka Booliiska Soomaaliya oo toogasho ku dilay nin dilay Askari ka...
Mohamed Abdullahi Mohamed - April 8, 2022 0